Gaga sy talanjona anefa ny mpanao gazety raha nandre ny tenin’ity filoha teo aloha ity nilaza tampoka fa niova ny fitondrana ka tsy mety intsony ny fanaovana tatitra ka voatery hafindra amin’ny fotoana sy toeran-kafa. Raha ny fanazavan’ny teo anivon’ny Antenimieram-pirenena indray dia efa vita ny fifamindram-pahefana ka sao tsy mitovy ny zavatra efa voarakitra ao anatin’ny tatitra sy izay hotenenina. Mifono zavatra hafa mihitsy ny raharaha hoy ireo nanatri-maso. Sao mba hisy indray ny valifaty politika ? Asa aloha fa dia yita soa aman-tsara ny fifamindram-pahefana teo amin’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena vaovao Razanamahasoa Christine sy ny filoha teo aloha Jean Max Rakotomamonjy; Nizotra tao anatin’ny fifanajana sy fahatsorana ny fotoana.